Wasiir ka tirsan Mareykanka ayaa booqday Taiwan taasi oo ka careysiisay dalka Shiinaha… – Hagaag.com
Wasiir ka tirsan Mareykanka ayaa booqday Taiwan taasi oo ka careysiisay dalka Shiinaha…
Waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhaxeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, waxaana labada dal qaadanayaan talaabooyin u muuqda kuwa uga sii daraya xiriirka xun oo hadaba ka dhaxeeya.
Dowlada Mareykanka ayaa markan qaaday talaabo cusub oo ka careesiisay dowlada Shiinaha ugana sii dartay khilaafka u dhaxeeyay, waxaana Wasiir katirsan dowlada Mareykanka kulan la qaatay Madaxweynaha Taiwan.
Wasiirka Caafimaadka iyo bani’aadamnimada Dowlada Mareykanka Alex Azar, ayaa noqday masuulkii ugu sareeyay oo Mareykanka ah oo booqda Jaziirada Taiwan lana kulma Madaxweynaha maamulkaasi.
Alex Azar, ayaa maanta oo isniin ah kulan la qaatay Madaxweynaha Taiwan, labada dhinac ayaana kawada hadlay arimo badan oo kamid tahay ka shaqeynta xiriirka Mareykanka iyo Jaziirada madax banaanida rabta ee Taiwan.
Dowlada Shiinaha ayaana si weyn uga carootay talaabada dowlada Mareykanka qaaday, waxaana Shiinaha ugu baaqday dowlada Mareykanka in ay xushmeyso madax banaanida dhul weynaha Shiinaha iyo nidaamkiisa.
“Shiinaha wuxuu si adag uga soo horjeedaa xiriir kasta oo rasmi ah oo dhex mara Mareykanka iyo Taiwan, waxaan ku boorrineynaa Mareykanka inuusan wax calaamado khaldan ah u dirin ‘Arrimaha xornimada Taiwan’ si looga hortago inuusan aad usii xumaanin heer waxyeello ahna gaadhin xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha” ayuu yiri Afhayeen u hadlay Shiinaha.
Xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaana mudooyinkii dambe ahaa mid sii xumaanayay, waxaana labada dal dhawaan siyaabo kala duwan u xireen qunsuliyado ay ku kala lahaayeen gobolo katirsan Mareykanka iyo Shiinaha.